Talaado, Dec 15, 2020-Kulamada Nairobi ee madaxa Kenya iyo Somaliland oo galinka danbe ee maanta la soo gabagabey-nayo – LaacibOnline
Talaado, December, 15, 2020 (HOL) – Galinka danbe ee maanta ayaa lagu waddaa in la soo gabagabeeyo wadahadallada magaalada Nairobi uga soconaya madaxda Somaliland iyo Kenya oo ay kala hoggaaminayaan Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Somaliland iyo Keya ayaa wadahadalladoodan xoogga ku saaraya hagaajinta xiriirka dhinaca ganacsiga ee ka dhaxeeya, sidoo kale waxaa wadahadallada qeyb ka ah arrimaha Amniga oo kulanka leyskula soo qaaday.
Qaar ka mid ah Aqoonyahannada Soomaaliyeed ayaa sheegay in marka la eego hab-maamuuska lagu soo dhaweeyay wafdiga uu horkacayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee ku sugan magaalada Nairobi dowladda Kenya u muuqato in ay aqoonsi dadban siineyso Somaliland.
Laakiin haddana dhinaca kale warar hoose oo la helayo ayaa sheegay in Kenya ka weecaneyso in kulanka ay ku soo qaado arrimaha siyaasadeeda iyada oo xormeyneysa madax-bannaanida iyo midnimada Soomaaliya.
← Somalia: Puntland Forces ‘Ordered’ to Remove Posters of PM Roble Ahead of Polls
Talaado, Dec 15, 2020-Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya ”Annaga iyo Puntland iskuma afgaran Arrimaha Doorashooyinka →
Arbaco, Jan 6 , 2021-Janaraal Xuud oo Shirjaraa’id ku qabtay gudaha Baledweyne oo si kulul uga hadlay arrimo xasaasi ah
Arbaco, July 29, 2020-Puntland iyo shirkadda DP- World oo meel adag kala taagan iyo madaxweyne Deni oo bisha August ku wajahan Dubai